एक दशकदेखि महिला बन्दी गृह निर्माण अलपत्र, आएको १४ लाखको काम बालुवाको पानी बन्यो
पर्वत । साबिकको धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङलाई समेट्ने गरी निर्माण थालिएको एक मात्र महिला बन्दी गृह झण्डै एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । दश वर्ष अगाडि रु ७२ लाखको योजनामा बन्दी गृह निर्माणको काम शुरु गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा रु १४ लाख मात्र बजेट आएपछि सोही रकमले मात्र निर्माण थालिएको बन्दी गृह नै अलपत्र परेको हो ।
चार बालिकामाथि याैन दुर्व्यवहार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई पाँच वर्ष कैद
पर्वत । आफैँले पढाउने चार बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रधानाध्यापकलाई पर्वत जिल्ला अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
जेठी श्रीमतीले जाहेरी दिएपछि श्रीमान् र श्रीमती बन्न आउने प्रहरी खोरमा
हिलिहाङ । जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती विवाह गर्ने र कान्छी श्रीमती बन्न आउने जोडीलाई पाँचथर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–६ का २५ वर्षीय शक्ति थुलुङ र कान्छी श्रीमती बन्न आउने पाँचथरको फालेलुङ गाउपालिका–८ याङनामकी २९ वर्षीया सम्झना जगेबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
यस्ता ६ अभियोग लागेका अभियुक्त जसलाई केही पनि पछुतो छैन
काठमाडौँ । काठमाडौँ प्रहरीको हिरासतमा छन्– पाँचथर फलैँचा गाउँपालिका रविन कुमार चिमोरिया । उनको व्यवहारले प्रहरीलाई आश्चर्यमा पारिदिएको छ । अरु अभियुक्त समातिएपछि बयान फेर्छन् । तर चिमोरियाले भने सधैँ सही बताउँछन् ।
बिरालो मार्ने ट्याक्सी चालकलाई दुई वर्ष जेल !
काठमाडौँ । बिरालो मारेको कसुरमा मलेसियामा एक जना ट्याक्सी चालकलाई दुई वर्षको जेल सजायको फैसला गरिएको छ। गर्भवती बिरालो मारेको कसुरमा अदालतले बिहीबार ती चालकलाई जेल सजायको फैसला गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
मानव बेचबिखनमा दाेषी ठहर गर्दै बीस वर्ष जेल सजायँ
नुवाकोट । युवतीलाई ललाइफकाइ भारतमा बिक्री गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एक जनालाई अदालतले २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
आगो लगाएको मुद्दामा फरार ठगबहादुर पक्राउ
तनहुँ । तनहुँ अदालतबाट कैद तोकिएका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ । घरमा आगो लगाएको मुद्दामा तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ का ५० वर्षीय आइत भन्ने ठगबहादुर कमर जोगी पाँच वर्षपछि पक्राउ परी बिहीबार कारागार चलान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्यालले जानकारी दिए ।
रेडपाण्डाकाे छाला ओसारपसारमा संलग्न एकजना जेल चलान
काठमाडौँ । दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छाला ओसारपसार र बिक्री वितरणमा सङ्लग्न एक व्यक्ति आज जेल चलान भएका छन् ।
साउदी पुगेकै दिन जेलमा
काठमाडौं । बराहक्षेत्र नगरपालिका २ सुनसरीका भुपाल बस्नेतके सकेसम्म स्वदेशमै केहि काम गरौँ भन्ने सोच थियो । सोही सोचले गर्दा उनले पहिलोपटकको वैदेशिक रोजगारी त्यागे पनि । वैदेशिक रोजगारीबाट खासै प्रगति हुने नदेखेपछि साउदी अरेबियाबाट घर फर्केका बस्नेतले गाउँमै उद्यमका लागि अनेक प्रयत्न गरे । तर, उनले सोचे अनुसार देशको अवस्था कहाँ छ र ?
१६ जना प्रहरीलाई आजीवन जेल सजायको फैसला
नयाँ दिल्ली । भारतको एउटा अदालतले १६ जना प्रहरी अधिकारीलाई बुधबार आजीवन जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । देशको उत्तरी क्षेत्रमा दशकौँ अघि भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई आजीवन जेल सजायको फैसला सुनाइएको अदालतका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।